မလွဲမသွေပြန်လည်ရေးဆွဲရမည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ။ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မလွဲမသွေပြန်လည်ရေးဆွဲရမည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥဒေ အခန်း ( ၈ ) နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့် အရေးနှင့် တာဝန်များခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ပုဒ်မ-၃၄၅ နှင့် ပုဒ်မ-၃၄၆ တို့ကို အောက်ပါ အတိုင်း ပြဌာန်းထားပါသည်။
ပုဒ်မ-၃၄၅ အောက်ဖော်ပြပါအရည်အချင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ပြည့်စုံသူများသည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်။
(က) “ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ တိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူ”
(ခ) “ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုပြဌာန်းသည့်နေ့တွင် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူ” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ပုဒ်မ-၃၄၆ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံသားပြုခြင်းနှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်းတို့သည် ဥပဒေပြဌာန်းသည့်အတိုင်း ဖြစ်စေရမည်။
၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအခန်း ( ၂ ) တွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကို ပုဒ်မ-၂ မှ ၂၂ ထိလည်းကောင်း၊ အခန်း ( ၄ ) တွင် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဖြစ်ခြင်းကို ပုဒ်မ-၄၂ မှ ပုဒ်မ-၆၄ ထိလည်းကောင်း ပြဌာန်းထားခြင်းမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၃၄၆ တွင် ရည်ညွှန်းသော ဥပဒေပြဌာန်းချက်များဟု မှတ်ယူနိုင်သော်လည်း အခန်း ( ၃ ) တွင် ဧည့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကို ပုဒ်မ-၂၃ မှ ပုဒ်မ-၄၁ အထိ ပြဌာန်းထားရာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် မပါရှိသည့် ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ပင်မဥပဒေဖြစ်သဖြင့် ထိုဥပဒေတွင် ပြဌာန်းထားခြင်းမရှိ သော ဧည့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဌာန်းချက်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် စပ်လျဉ်း သမျှ အတည်ဖြစ်ရန် အကြောင်းမရှိပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေပုဒ်မ-၂ ( ခ ) တွင် နိုင်ငံသားဆို သည့် စကားရပ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားကိုဆိုလိုကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ထိုဥပဒေ ပုဒ်မ-၂ ( စ ) တွင် နိုင်ငံသားလက်မှတ်ဆိုသည်မှာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ် ( ရွေးချယ်ရေး ) အက်ဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား ပြစ်မှုအက်ဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ ဤဥပဒေအရဖြစ်စေ ထုတ်ပေးထားသော နိုင်ငံသားလက်မှတ်ကို ဆိုသည်ဟုလည်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေပုဒ်မ-၇၅ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ၀န်ကြီးအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော်ကောင်စီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်- ၁၃/၈၃ ဖြင့် နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ( ၂၀-၉-၁၉၈၃ ) နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်။
( ကြေညာချက်အမှတ်-၁၄/၈၃ နှင့် ၁၅/၈၃ တို့အရလည်း ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံသား ပြုခြင်းခံရသူဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ )
၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ပြဌာန်းသည့် ဥပဒေ အမှတ်-၄/၁၉၈၂ ဖြစ်သော်လည်း ထိုဥပဒေအာဏာတည်သည့်ရက်ကို ထည့်သွင်းပြဌန်းထား ခြင်းမရှိသည့်အပြင် နောင်ကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်များအရလည်း ထိုဥပဒေအတည်ပြုသည့်နေ့ရက်ကို ပြဌာန်းကြေညာထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်သာ နိုင်ငံသားဥပဒေအာဏာတည်သည့်ရက်ကို ( ၁၅-၁၀-၁၉၈၂ ) ခုနှစ်ဟု ၀န်ကြီးအဖွဲ့၏ထည့်သွင်းကြေငြာခဲ့ရာ ထိုစဉ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်က အတည်ပြု ပြဌာန်း ကြေညာသော ဥပဒေဖြစ်သကဲ့သို့ အတည်ဖြစ်၊ မဖြစ် ဆိုသည်ကို ယခုကျင်းပနေသော ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။
နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် နိုင်ငံသားလက်မှတ်အဖြစ် ပုံစံ ( နိုင်-၆ ) ပန်းရောင်အဖုံးပါ စာအုပ်ကို နမူနာအဖြစ် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။
၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေပြဌာန်းသည့်နေ့ကစ၍ ယနေ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ နှစ် ( ၃၀ ) အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသည့် ပန်းရောင်စာအုပ် ( နိုင်-၆ ) နိုင်ငံသားလက်မှတ်နမူနာကိုပင် တွေ့မြင်ဖူးသူ အလွန်ရှားပါးပါသည်။
၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေသည် ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြဌာန်းချက်နှင့် အညီအညွတ်မဖြစ်သဖြင့် ဥပဒေပြဌာန်းသည့်နေ့မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ် န၀တ အစိုးရ က နိုင်ငံတော်အာဏာကို လွှဲပြောင်းရယူသည့်နေ့အထိ ( ၆ ) နှစ်ကျော် Dead Law အဖြစ် ရှိနေရာက ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးချယ်ခံရမည့်သူမျာနှင့် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ စာရင်းများကို ပြုစုနိုင်ရန်အတွက်သေနေသော ဥပဒေကို ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်တွင်းနေသူတစ်ဦးသည် မြန်မာနိုင်ငံသားဟုတ်၊ မဟုတ် သေချာစွာ စိစစ်ပြီးမှ ပုံစံ ( နိုင်-၆ ) ကို ပေးရမည်ဖြစ်ရာ၊ ယခုအဆင့်တွင် ထိုသူနိုင်ငံသားဟုတ်၊ မဟုတ် စိစစ်နိုင်ရန်အတွက် ပုံစံ-နိုင်-၆ ( က ) နိုင်ငံသားစီစစ်ရေး ကတ်ပြားကိုသာ လ၀ကဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုပုံစံ နိုင်-၆(က) ကို ကိုင်ဆောင်ထားသူသည် နိုင်ငံသားဥပဒေ ပုဒ်မ-၂ ( စ ) တွင် အတိအလင်းပြဌာန်းထားသော ဤဥပဒေအရထုတ်ပေးသော နိုင်ငံသား လက်မှတ်ပုံစံ ( နိုင်-၆ ) ကို ကိုင်ဆောင်ခွင့် မရရှိသေးမှီ ပုဒ်မ-၂ ( ခ ) ပါ မြန်မာနိုင်ငံသားဟု တထစ်ချမှတ်ယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပိုဒ်-၃၆ တွင် နိုင်ငံသားလက်မှတ်ကို အတုပြုလုပ် လျှင် ထောင်ဒါဏ် ( ၁၅ ) နှစ် ကျခံစေရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားပြီး၊ အပိုဒ်-၃၇ တွင် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားပုံစံ နိုင်-၆ ( က ) ကို အတုပြုလုပ်လျှင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
စီရင်ထုံးများအရဆိုပါလျှင် ပုံစံ-နိုင်-၆ ( က ) ကို အတည်ပြုလုပ်လျှင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ-၄၆၈ အရ ( ၇ ) နှစ်ထက်မပိုသော ပြစ်ဒဏ်နှင့် ငွေဒဏ်ကို ချမှတ်ပြီး၊ ပုံစံ နိုင်-၆ ကို အတုပြုလုပ်လျှင် နိုင်ငံသားဥပဒေပုဒ်မ ( ၂၁ ) အရ ထောင်ဒဏ် ( ၁၅ ) နှစ်နှင့် ငွေဒဏ်ကို ကျခံနေကြရသဖြင့် ပုံစံ-( နိုင်-၆ ) နှင့် ပုံစံ-နိုင်-၆ ( က ) မှာ အနှစ်သာရ မတူပါ။
ပုံစံ ( နိုင်-၆ )တွင် ဥပဒေများအရ UCC နှင့် ၁၉၈၂ ခု နိုင်ငံသာဒဥပဒေ အရ လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရှိသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြပါသည် ဟု ၀င့်ကြွားစွာပြောဆိုနိုင်ကြ မည်ဖြစ် သော်လည်း ပုံစံ နိုင်-၆ ( က ) ကိုင်ဆောင်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ပုံစံ ( နိုင်-၆ ) ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရရှိရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ စိစစ်ခံနေရဦးမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့သော အခြေအနေတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၃၄၅ ( ခ ) တွင် ဖော်ပြထားသော ဤဥပဒေအာဏာတည်သည့်နေ့တွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူများသည် နိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဟု ပြဌာန်းထားသည့် အခွင့်အရေးကို ( ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဥပဒေနှစ်ရပ်တို့ဖြင့် UCC ခေါ် နိုင်ငံသားလက်မှတ်ထုတ်ယူရရှိထားသူများမှ အပ ) တရားဝင်ရရှိခံစားနိုင်ကြရမည် မဟုတ်ပါ။
အိန္ဒိယတိုက်ငယ်နှင့် တရုတ်ပြည်မကြီးတို့မှ ၀င်ရောက်လာပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဥပဒေနှစ် ရပ်ပါ UCC ခေါ် နိုင်ငံသားလက်မှတ်ကို လျှောက်ထားရယူကိုင်ဆောင်ထားကြသူများသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတည်ဖြစ်သည့်နေ့တွင် ဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြသော်လည်း ၂၀၀၈ခု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် နိုင်ငံသားများမှ မွေးဖွားလာသူများ သည်လည်း နိုင်ငံသားဖြစ်သည် ဟု အတိအလင်းခွင့်ပြုပြဌန်းချက်မရှိသဖြင့် နိုင်ငံသား မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားလာသူများမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၃၄၅ အရ နိုင်ငံသားအဖြစ်ကို မရရှိနိုင်ကြဘဲ ပုဒ်မ-၃၄၆ အရ ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေအရသာလျှင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရထိုက်၊ မရထိုက် စိစစ်မှုကို ခံယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၃၄၅ ( က ) တွင် တိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူများ သည် နိုင်ငံသားများဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကို အငြင်းမပွားလိုသော်လည်း တိုင်းရင်းသားဆိုသည့် စကားရပ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ ပြဌာန်းချက်များအရ အဂတိတရား မပါရှိဘဲနိုင်ငံသားတစ်ဦး ဟုတ်မဟုတ်ဆိုသည်ကို တိကျစွာ ခွဲခြားဆုံးဖြတ် သတ်မှတ်ရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေပုဒ်မ-၅ တွင် တိုင်းရင်းသားတိုင်းသည်လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်း သားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူတိုင်းသည်လည်းကောင်း မွေးရာပါ နိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဟုလည်း ကောင်း ပုဒ်မ ( ၃ ) တွင် နိုင်ငံတော်တွင် ပါဝင်သော နယ်မြေတစ်ခုခု၌ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၈၅ ခုနှစ်၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၂၃ ခုနှစ် မတိုင်မီကာလမှစ၍ ပင်ရင်းနိုင်ငံအဖြစ် အမြဲနေထိုင် ခဲ့သော ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းစသည့် တိုင်းရင်းသားများနှင့် မျိုးနွယ်စုများသည် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဟုလည်းကောင်း ပြဌာန်းထားပါသည်။
န၀တအစိုးရအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော်ကောင်စီ၏ အာဏာကို ကျင့်သုံးပြီး ထင်ရှားသော တိုင်းရင်းသား ( ၈ ) မျိုး အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု ( ၁၃၅ ) မျိုး၏ စာရင်းကိုထုတ်ပြန် ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားများဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံသား ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အပိုဒ်-၅ တွင် –
“ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းစသည့် လူမျိုးများပင် ဖြစ်စေကာမူ နိုင်ငံတော်တွင် ပင်ရင်းနိုင်ငံအဖြစ် အမြဲနေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အခြားနိုင်ငံတွင် ပင်ရင်းနိုင်ငံအဖြစ် အမြဲနေထိုင်ကြသူများသည် တိုင်းရင်းသားများမဟုတ်ပါ။ ၁၈၂၃ ခုနှစ်၊ နောက်ပိုင်း နိုင်ငံ အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်နေထိုင်ကြသော အမည်တူမျိုးနွယ်စုများသည်လည်း တိုင်းရင်းသားများ မဟုတ်သည့်အပြင် မွေးရာပါနိုင်ငံသားများလည်း မဟုတ်ပါ။ အခြားနိုင်ငံတစ်ခု၏ နိုင်ငံသား အဖြစ်ကို ခံယူထားသော တိုင်းရင်းသားသည်လည်းကောင်း၊ ထိုသို့ တိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူများသည်လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများ မဟုတ်ပါ” ဟု ချွင်းချက်ပြုထားသည် ကို တွေ့ရှိရသည်။
ဤသို့ဆိုပါလျှင် ဗမာလူမျိုးဖြစ်သည်ဆိုယုံမျှနှင့် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားဟု တထစ်ချ မပြောနိုင်ပါ။ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်မှစ၍ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အစဉ်တစိုက်နေထိုင်သော ဗမာလူမျိုး၊ ရှမ်းလူမျိုး၊ မွန်လူမျိုး စသည်တို့သည် ထိုနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံသားများသာဖြစ်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားမဟုတ်နိုင်ပါ။
အလားတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရှိ မီဇိုလူမျိုးများ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ စစ်တကောင်းဒေသရှိ ရခိုင်မျိုးနွယ်စု မောက်တိုင်းရင်းသားများသည် ၄င်းတို့အစဉ်တစိုက် နေထိုင်သော အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံတို့၏ ကျေးဇူးသစ္စာကိုသာ ခံယူနေကြသူများဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံသားဟု မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ သတ်မှတ်၍ မရနိုင်ပါ။
ထို့အပြင် အသက်ဘေးအန္တရာယ်အရသော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးအရသော် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးအရသော်လည်းကောင်း အမိနိုင်ငံကို စွန့်လွှတ်ထွက်ခွာသွားပြီး သူတစ်ပါးနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားအဖြစ်ကို ခံယူနေကြသောသူများမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသားဟူ၍ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရ သတ်မှတ်၍မရနိုင်တော့ပါ။
၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံသားဥပဒေနှင့် ထိ်ုဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း နေထိုင်သောသူတစ်ဦးကို စစ်ဆေးရာတွင် လူမျိုးကို အကြောင်းပြု၍ တိုင်းရင်းသားဟု သတ်မှတ်ခြင်းမပြုနိုင်ဘဲ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ဆွေစဉ် မျိုးဆက်များမှာ ၁၈၂၃ ခုနှစ် မတိုင်မီက ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တစ်ဆက်တည်းနေ ထိုင်လာခြင်း ဟုတ်၊ မဟုတ် စစ်ဆေးပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ရမည့် ပြဿနာဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကို ပြဌာန်းရန်နှင့် မည်သည်ဥပဒေများကို တရားဝင်ပြဌန်းပါဟု ညွှန်ကြားခဲ့သည့် လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဌ ဦးနေ၀င်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကို လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီဥက္ကဌ ဦးစန်းယုတို့၏ ကိုယ်ရေးသမိုင်းကိုပင် တိုင်းသူပြည်သားများမသိရှိနိုင်သော အခြေအနေတွင် ၄င်းတို့၏ ဘိုးဘေးဘီဘင်တို့ကို သိရှိနိုင်အောင် စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ဆိုသည်မှာ မဖြစ်နိုင်သည်ကို လ၀က ၀န်ထမ်းများအား ဆောင်ရွက်စေရန်ဥပေးအရ တာဝန်ပေးထားရာ ကျရောက်နေပါသည်။
ဤကဲ့သို့သော အခြေအနေတွင် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လ၀ကပုံစံ (နိုင်-၆ ) နိုင်ငံသား လက်မှတ်ထုတ်ပေးမည်ဆိုပါက ထိုသူ၏ မိဘနှစ်ပါးမှာ ၁၈၂၃ ခုနှစ် မတိုင်မီက ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အစဉ်တစိုက်နေထိုင်ခဲ့ကြသော တိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားစေပြီးမှ သာ ပုံစံ ( နိုင်-၆ ) ကို ထုတ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ပုံစံ ( နိုင်-၆ ) ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါ လျှင် ထိုသို့ ပုံစံ ( နိုင်-၆ ) ရရှိခြင်းသည် အဂတိတရားတစ်ပါးပါးအရ ထုတ်ပေးခြင်းဟုသာ မှတ်ယူပါက ရာနှုန်းပြည့်မှန်မည်ဖြစ်ပါသည်။
န၀တအစိုးရမှ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သော တိုင်းရင်းသား ( ၁၃၅ ) မျိုးမှာ လူမျိုးနွယ်စု အမည်ကိုသာ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မည်သူမည်ဝါသည် ၁၈၂၃ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံတော် အတွင်း အစဉ်တစိုက် နေထိုင်ခဲ့သော ထိုမျိုးနွယ်စုမှ ပေါက်ဖွားလာသူဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ခဲ့ ခြင်းမဟုတ်ပါ။
သုိ့ရာတွင်ထင်ရှားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ( ၈ ) မျိုးတွင် အကြုံးဝင်သက်ဆိုင်သော မျိုးနွယ်စုငယ်များအနက် အချို့မျိုးနွယ်စုများမှာ ပြည်ပတွင် နေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ပြည်တွင်းတွင် သာ အစဉ်တစိုက်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ပတွင် အလားတူမျိုးနွယ်စု လုံးဝမရှိကြောင်း သက်သေထင်ရှားပါက ထိုလူတစ်ဦး၊ လူတစ်စုတို့က တိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားလာခဲ့သော နိုင်ငံသားအဖြစ် ပုံစံ ( နိုင်-၆ ) ကို ထုတ်ပေးမည်ဆိုပါက ထိုလူနည်းစု အတွက်ပင် တိကျသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသေးစိတ် ရေးဆွဲ ပြီးမှ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ် (၈) အရဆိုပါလျှင် နိုင်ငံတော်အတွင်းဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်ပြင်ပတွင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူ၊ နိုင်ငံသားနှင့် ဧည့်နိုင်ငံသား မိဘနှစ်ပါး မှ မွေးဖွားသူ၊ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူများသည်လည်း နိုင်ငံသားများဟုပြဌာန်းပါရှိသည့်အပြင် ဧည့်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးမှ မွေးဖွားသူနှင့် နိုင်ငံသားတမျိုးမျိုး တို့မှ မွေးဖွားသူများသည်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူနှစ်ဦးမှ မွေးဖွားသူနှင့် နိုင်ငံသား အမျိုးမျိုးတို့မှ မွေးဖွားသူများသည်လည်းကောင်း၊ ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူတို့မှ မွေးဖွားသူနှင့် နိုင်ငံသားတစ်မျိုးမျိုးတို့မှ မွေးဖွားသူတို့သည်လည်းကောင်း နိုင်ငံသားဖြစ်သည် ဟု ပြဌာန်းထားသည့်အပြင် ဦးနေ၀င်းက အိုင်းစတိုင်းကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို နိုင်ငံသားပေးနိုင် ကြောင်း ပြဌာန်းချက်မျိုးကိုလည်း ထည့်သွင်းရန် ညွှန်ကြားသဖြင့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီသည် နိုင်ငံတော်၏အကျိုးငှာ မည်သူ့ကိုမဆို နိုင်ငံသားတမျိုးမျိုး သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းကိုပါ ပုဒ်မ-၈ (က) တွင် ထည့်သွင်းပြဌာန်းထားခြင်းတို့သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၃၄၆ ပါ “နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းသည် ဥပဒေပြဌာန်းသည့်အတိုင်း ဖြစ်စေရမည်” ဆိုသည့် ပြဌာန်းချက် ဘောင်အတွင်း အကြုံးဝင်သည်ဟုမှတ်ယူနိုင်သော်လည်း ၁၉၈၂ ခုနှစ်မြန်မာ နိုင်ငံသားဥပဒေ ပါ ပြဌာန်းချက်များသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၃၄၅ ( က ) နှင့် ( ခ ) တွင်အတိအလင်း ပြဌာန်းချက်ကို ကျော်လွန်ပြဌာန်းရာ ကျရောက်နေသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၃၄၆ ပါ ပြဌာန်းချက်ကိုိ ကျင့်သုံးပြီး ဥပဒေနည်းဥပဒေများ ကို လွတ်လပ်စွာ ပြဌာန်းနိုင်သည်ဟု ဆိုပါလျှင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၃၄၅ ( က ) နှင့် ( ခ ) တို့ကို ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပြီး ပြဌာန်းထားခြင်းမှာ အာနိသင်ရှိတော့မည် မဟုတ်ပါ။
ပြည်တွင်းဥပဒေများကို ပြဌာန်းရာတွင် နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်များကို အလေး အနက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အများပြည်သူနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်အပိုဒ်-၂၄ ( ၃ ) တွင် မွေးဖွားလာသော ခလေးသူငယ်များသည် နိုင်ငံသား အဖြစ် ရယူခွင့်ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး ကလေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူ စာချုပ်အပိုဒ်-၇ ( ၂ ) တွင် ကလေးသူငယ်များ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရရှိစေရန် နိုင်ငံများက လုပ်ဆောင်ပေးရန် ပြဌာန်းချက်များကို မြန်မာနိုင်ငံကလည်း လိုက်နာဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပါလျက် ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ ကလေးသူငယ်ဥပဒေတွင် ခလေးသူငယ်တိုင်းသည် နိုင်ငံသား ဖြစ်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကို တည်ဆဲဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီသာ ရခွင့်ရှိကြောင်း ပြဌာန်း ထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမွေးဖွါးသော ကလေးသူငယ်များ၏ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို ၂၀၀၈ ခု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေတို့တွင်သီးခြား ပြဌာန်းထားခြင်းမရှိပါ။
သို့ရာတွင်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေပုဒ်မ- ၂(စ) တွင် အတိအလင်းဖေါ်ပြထားသော နိုင်ငံသားလက်မှတ်ကို ကိုင်ဆောင်ခွင့် မရရှိစေကာမူ သုံးခေါက်ချိုးအမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ကဒ်ပြားနှင့် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြား ကိုင်ဆောင်ထားသူများကို အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများက မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြပါသည်။
နိုင်ငံသားများသာပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိသည့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများ၊ နိုင်ငံသားများသာထမ်းဆောင်ခွင့်ရှိသည့်စစ်ဘက်၊နယ်ဘက်အရေးကြီးသည့်ဝန်ထမ်းနေရာများတွင်နိုင်ငံသားတစ်ဦးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရရှိကြပါသည်။
၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားသားများကဲ့သို့ ကန့်သတ်ခြင်းမခံရပဲ မရွှေ့မပြောင်းနိုင် သောပစ္စည်းများကို လွှဲပြောင်း၊ ရောင်းချ၊ ပေါင်နှံ၊ လဲလှယ်၊ ပေးကမ်း၊ အမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့်၊ အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရရှိခံစားလျှက်ရှိကြပါသည်။ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရလည်းမရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခွင့် အခွင့်အရေးကို ရရှိကြပါသည်။
ကိုလိုနီခေတ် (၉၁ဌာနရွေးကောက်ပွဲ) ပါလီမန်ခေတ်၊ လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီခေတ်၊ အဆင့်ဆင့်တို့တွင် နိုင်ငံသားများသာရွေးကောက်ခံရမည့် အခွင့်အ ရေးများကိုလည်း ရရှိခံစားလျှက်ရှိကြပါသည်။
ယခုအခါ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ ပြုနိုင်ငံသားများကို ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲများတွင် မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးသာပေးထားပြီး ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးကို ကန့်သတ်ထားပါသည်။
သို့ရာတွင် တရားရုံးချုပ်၊ မန္တလေးရုံးထိုင်၏ တရားမအထူး အယူခံမှုအမှတ် (၈/၂၀၀၀) နှင့် နေပြည်တော်တရားရုံးချုပ်၏ တရားမအထူး အယူခံမှုအမှတ် (၁၁/၂၀၀၉ ) တို့တွင် ဒုတိယ တရားသူကြီးချုပ်ပါဝင်သော သုံးပါးထိုင် တရားရုံးများက ဧည့်နိုင်ငံသားများသည် နိုင်ငံသား မဟုတ်ကြောင်း စီရင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဘူးသည်လည်းရှိနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည်အများပြည်သူနှင့်နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူ စာချုပ်ကိုလက်မှတ် ရေးထိုးထားသဖြင့်ထိုစာချုပ် အပိုဒ်-၂၄(၃)အရ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမွေးဖွားလာခဲ့သော ကလေးသူငယ်များကို နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို ထိုစာချုပ်နှင့်အညီ ပေးရမည့်အပြင် ကလေး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတစ်ကာသဘောတူစာချုပ် အပိုဒ်-၇ (၂) အရလည်း ကလေး သူငယ်များကို နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ရရှိစေရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြခံဥပဒေနှင့် နိုင်ငံသားဥပဒေတို့တွင် အတိအလင်းထည့်သွင်းပြဌာန်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေတို့မှာ နိုင်ငံတစ်ကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ မလွဲမသွေပြင်ဆင်ရမည့်ဥပဒေများ ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် လွယ်လွယ်ကူကူ ပြင်ဆင်၍မရနိုင်အောင်ပြဌန်းထားသော ဥပဒေဖြစ်ရာ ထိုဥပဒေအစား ဖွဲ့စည်းပုံအခြခံဥပဒေအသစ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ အသစ် တို့ကိုရေးဆွဲပြဌန်းသင့်ပါသည်။
This entry was posted on February 27, 2013, in အထူးကဏ္ဍ, ဥပဒေ, ဆောင်းပါး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
တက္ကသိုလ်အဆောင်များ ပြန်ဖွင့်ရန် စီစဉ်နေ →